သေချာပေါက် အနိုင်ရရှိခဲ့သင့်တဲ့ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေ ညံ့ခဲ့ကြလို့ ယူနိုက်တက်တို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတာလဲ? (Rating) - Sports myanamr
သေချာပေါက် အနိုင်ရရှိခဲ့သင့်တဲ့ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေ ညံ့ခဲ့ကြလို့ ယူနိုက်တက်တို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတာလဲ? (Rating)
September 14, 2021 - by Editor
မနေ့ညကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဖွင့်ပွဲစဥ် အဖြစ် ဆွစ်ဇာလန်မြေမှာ ယူနိုက်တက်တို့ ဟန်းဘွိုင်းစ် အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့ ရပြီး2– 1 ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ရှုံနိမ့်ခဲ့ကာ အမှတ်ဗလာနဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါဟာ သေချာပေါက်် အနိုင်ကစားသင့်တဲ့ ပွဲစဥ်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် ဒီရလဒ်ဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီ​နေ့ ပွဲမှာတော့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုဟာ ပွဲချိန် 13 မိနစ်မှာပဲ အသင်းအတွက် ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပွဲချိန် 35 မိနစ်မှာ ပြိုင်ဖက် ကွင််းလယ်လူရဲ့ ခြေထောက်ကို တက်နင်းခဲ့မိတဲ့အတွက် တိုက််ရိုက် အနီကဒ် ပြသခံခဲ့ရခြင်းက ပွဲစဥ်ကို အပြောင်းလဲ ဖြစ်စေဖို့ အစပျိုးသွားခဲ့ပါတယ် ။
ပွဲချိန် 66 မိနစ်မှာတော့ ယန်းဘွိုင်းစ် အသင်းမှ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမားဖြစ်သူ အန်ဂါမာလီယူဟာ ခြေပဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို ပွဲချိန် ပြီးဆုံးခါနီး နာကျင် အချိန်ပို မိနစ််မှ ဂျက်စီ လင်ဂတ်ရဲ့ ဘောလုံး အပေးမှားမှုက ယူနိုက်တက်တို့ကို2– 1 ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ရှုံးနိမ့် သွားစေခဲ့တာပဲ ဖြစ််ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဥ်အတွင်း ယူနိုက်တက် အသင်းဖက်မှ ဘယ်သူတွေ ကောင်းပြီး ၊ ဘယ်သူတွေ ညံ့ဖျင်းခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ် ။
အသင်းဖော်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက် ၊ အမှားတွေကြောင့်2ဂိုးထိ ပေးခဲ့ရပေမဲ့ တကယ့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ကာကွယ်မှု အချို့ လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဝမ် ဘစ်ဆာကာ (2)
ခံစစ်ပိုင်း ချိတ်ဆက် ကစားပုံ လုံလောက်စွာ မကောင်းမွန််ခဲ့သလို အစောပိုင်းမိနစ်မှာပဲ တိုက်ရိုက်အနီကဒ်ကို ရယူရင်း ဗီလိန် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။
ဗစ်တာ လင်ဒီလော့ဖ် (5)
ကစားပုံ အတန်အသင့် ကောင်းခဲ့ပေမဲ့ ယိုပေါက် အချို့တော့ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒုတိယပိုင်းမှာ မက်ဂွားယား ၊ ဗာရန်းတို့နဲ့ တွဲဖက် ကစားပုံ ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ် ။
အမြင့်ဘောတွေကို ဦးယူနိုင်ခဲ့သလို ခံစစ်ကစားပုံလည်း ကျစ်လျစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ခြေပဂိုး ပေးရာမှာ အမှားမကင်းသူ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ခံစစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ပါပဲ ။ တိုက်စစ် မကြာခန တက်ရောက်ပြီး အသင်းဖော်တွေနဲ့ ချိတ််ဆက် ကစားပုံကောင်းခဲ့သလို ခံစစ်ပိုင်း အတော်လေး လုံခဲ့ပါတယ် ။
ဗန်ဒီ ဘိခ် (5.5)
အစောပိုင်း မိနစ်တွေမှာ ကစားပုံ အတန်အသင့် ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မျှော်မှန်းထားသလောက်် မကောင်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကစားကွက်အပြောင််းအလဲ လုပ်ဆောင်စဥ် လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ် ။
ပထမပိုင်းအတွင်း အမှားနည်းအောင် ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး 10 ယောက်ပဲ ရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာတော့ လုပ်အားမြှင့်တင်ပြီး ဂိုးမပေးရဖို့ တက်စွမ်းသမျှ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။
သာမန် ကစားဟန်ကိုသာ ဆက်လက် ပြသနေဆဲပါပဲ ။ ထူးကဲ မလာသေးတဲ့ ခြေစွမ်းကြောင့် တစ်ယောက်လျော့ချိန်မှာ ဒါးလော့နဲ့ လူစားလဲခံခဲ့လိုက်ရပါတယ် ။
ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် (6)
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသလောက် မတောက်ပနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘရူနိုဟာ ဒီပွဲမှာ ပိုကောင််းအောင် ကစားပြနိုင်ခဲ့ပြီး လှပတဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှု လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီရာသီ ယူနိုက်တက်အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ အထူးတောက်ပခဲ့တဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ဒီပွဲမှာတော့ စွမ်းဆောင််ရည် ကျဆင်းနေခဲ့ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု နည်းပါးခဲ့ပါတယ် ။
အဖိုးတန် အဖွင့်ဂိုး သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့သလို ပြိုင်ဖက် ခံစစ််ကိုလည်း ဖိအားပေး ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်လျော့ အနေအထားကြောင့် ပွဲချိန်ပြည့် မကစားရပဲ လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ် ။
Previous Article ချန်ပီယံလိဂ် လူစာရင်း . . . ဒါပေမယ့် ယူရိုပါလိဂ် နည်းပြ
Next Article လက်ရှိ ချန်ပီယံတို့ လူကာကူရဲ့ တလုံးတည်းသော သွင်းဂိုးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အဖွင့်လှခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ၁ – ၀ ဇင်းနစ် ပွဲမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ ( Ratings )